Sheekada bukaan Kismaayo jooga, Soomaaliya. - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Khaliif oo shan sano jir ah waxaa xarunta quudin-ku-daweynta bukaan-jiifka ee MSF ee ku taalla magaalada Kismaayo ee koonfurta Soomaaliya lagu daweynayey muddo laba toddobaad oo keliya waxyar ka badan marka hooyadii, Abshiro Geeddi, ay ka sheekeyneyso qisadiisa cajiibka ah.
Qoysku waxaa ay deggan yihiin tuulada Mayondo, oo ilaa 60 km. Waqooyi ka xigta Kismaayo, oo ah degaan ay si weyn u saameeyeen
dhibaatooyinka hadda ka socda Soomaaliya. Laba wiil oo la dhalatey Khaliif ayaa dhowaan u dhintey dhibaatooyin ka dhashey jadeeco, waxaana Khaliif iyo walaashii iyaguna sidoo kale ku dhacay isla cudurkaas. Markii mid ka mid ah Abshiro walaalaheeda, oo ku nool Kismaayo, uu maqley warkii naxdinta lahaa ee ku saabsanaa geerida iyo xanuunka ilmaha uu abtiga u yahay, waxaa uu degdeg u
tagey Mayando si uu labada carruurta ah ee harey ee xanuunsan uu u keeno xarunta MSF ee quudin-ku-daweynta carruurta nafaqo-xumadu hayso ee ku taalla Kismaayo.
Markii uu halkaa gaarey, Khaliif waxaa la dhigey xarunta maaddaama lagu arkey calaamadaha nafaqo-xumo. “Maanta canuggan aad buu ugu duwan yahay kii uu ahaa markii halkaan lagu aqbaley,” ayaa uu yiri Cabdirisaaq Sheekh Cabdiwahaab, oo ah Kaaliyaha Isuduwaha Mashruuca MSF ee xarunta carruurta nafaqo-xumadu hayso ee Kismaayo. “Xaaladaha noocan ah ee bukaanku si degdeg ah u soo wanaagsanaado waa ay badan yihiin, ee Khaliif keligiis ma aha, laakiin tani waxaa ay [tusaale wanaagsan u tahay xaaladaha dadka ku haysta halkaan].”
Dhibaatada bani’aadamnimo ee hadda ka jirta kana socota Soomaaliya oo sida ugu adag ugu dhufatey gobollada koonfurta, ayaa MSF waxaa ay xarun quudin-ku-daweyn u furtey carruurta shan sano jirka ka yar ee ku nool magaalada Kismaayo, iyada oo higsaneysa in ay xakameyso nafaqo-xumada iyo geerida carruurta magaalada iyo degaamada ku hareereysan. Carruurta da’daan ku jirta ayaa halista ugu weyn ugu jira geeri ka dhalata nafaqo-xumo. Tan iyo markii xarunta la furey bishii Nofembar 2011, MSF waxaa ay daweysey carruur 300 ka badan, iyada oo celcelis ahaan ay mar kasta 50 ay daawo u socoto.
MSF waxaa ay Soomaaliya si joogto ah uga shaqeyneysey tan iyo sanadkii 1991 waxaana ay hadda daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ku bixisaa siddeed gobol. Shaqaale Soomaali ah oo ka badan 1,400, oo ay taageeraan ku dhowaad 100 shaqaale oo Nayroobi jooga, ayaa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, qalliin, daaweynta nafaqo-xumada, iyo sidoo kale taageero la siiyo dadka gudaha ku barokacay iyada oo loo marayo daryeel caafimaad, qaybinta biyo iyo agab gargaar ku bixiya sagaal degaan oo ku yaalla Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. MSF waxaa ay sidoo kale daryeel caafimaad siisaa qaxootiga Soomaalida ah ee Kenya iyo Itoobiya jooga.